पत्थरी फाल्ने सजिलो होम्योपैथीक औषधि Nepalpatra पत्थरी फाल्ने सजिलो होम्योपैथीक औषधि
पत्थरी फाल्ने सजिलो होम्योपैथीक औषधि
मृगौला हाम्रो शरीरको सवैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो मृगौलाको साहेतले रगत सफा गर्ने काम गर्दछ । हाम्रो खानपिनको लापरबाहीले मृगौला खराब हुन सक्छ । मृगौला पिठ्यूँको मध्यभागमा करङको ठीक मुनी हुन्छ । यिनीहरुको आकार हाम्रो मुठ्ठी बराबर हुन्छ ।
किड्नीमा कुनै समस्या उत्पन्न भयो भने त्यसको लक्षण प्रष्टरुपले व्यक्तिको शरीरमा देखिन्छ । व्यक्तिले कहिले जानी जानी वा थाहा नपाई लापरवाहीवस यसलाई नजरअन्दाज गर्‍यो भने समस्याले ठूलो रुप लिन्छ । आज मैले मृगौला रोगबाट बच्ने र होम्योपैथीक औषधिको माध्यमबाट कसरी उपचार गर्ने भन्ने बारे जानकारी पस्कन गइरहेको छु ।
मृगौला रोगको उपचारमा पानीको ठूलो भूमिका छ । यदि हामीले आवस्यकता नु सार पानी प्रसस्त पिउछौं भने मृगौला सम्मबन्धी कुनैपनि रोग नलाग्न सक्छ । हाम्रो शरीर लाई खानाको जति आवस्यक छ त्यो भन्दा बढी पानीको आवस्यक हुन सक्छ । स्वस्थ शरीरको लागि दैनिक कम्तीमा ३ देखि ६ लिटरसम्म पानी लिनु राम्रो हो ।
सबैभन्दा बढी मृगौला खराबी नेपालीहरूलाई हुने गरेको पाइन्छ । हरेक घरमा मृगौला सम्बन्धी रोग पाइन्छ यसको ठोस कारण भनेको पानीको कमि भन्दा खासै फरक छैन । होम्योपैथीक औषधि कम्पनिले पथ्थर चट्टा अजम्मरीको पातबाट यो औषधि बनाएर ल्याएको छ ।
१. Berberis Vulgaris Q (Mother Tincture) यो औषधिको झोललाई थोपाको रूपमा १५ देखि २० थोपा सम्म एक गिलास पानीमा राखेर दिनमा ३ पटक सम्म दिन सक्नु हुन्छ ।
२. # B14 Drops 15 थोपा दिनमा ३ पटक एक गलास पानीमा राखेर खान दिने ।
३. Magnesium Phosphoricom 6x ४ गोली दिनमा ४ पटक खान दिने ।
नोट : योग्य अनुभवी होम्योपैथीक डाक्टरको रेख देखमा उपचार गराउन सक्नुहुन्छ ।